IHICHAPU KỌMPUTA SITE NA MKPOFU - OTU ESI EME NGWA NGWA NA WINDOWS PC SITE NA IJI NGWAỌRỤ NDI OZO NA MMEMME NDI OZO, NTUZIAKA NA NTANETA IHUENYO - DISK - 2019
Ma onye ọrụ ahụ ga-achọ maọbụ na ọ bụghị, n'oge na-adịghị anya, kọmputa Windows ọbụla na-emepụta ọtụtụ faịlụ faịlụ oge (cache, akụkọ ihe nchọgharị, faịlụ ndekọ, faịlụ tmp, wdg). Nke a, ọtụtụ mgbe, a na-akpọ ndị ọrụ "ihe mkpofu."
PC amalite ịrụ ọrụ nke ọma karịa oge karịa: ọsọ nke mepee folda na-ebelata, mgbe ụfọdụ, ọ na-eche maka 1-2 sekọnd, diski diski na-aghọkwa ohere n'efu. Mgbe ụfọdụ, ọbụna njehie ahụ na-apụta na enweghi ohere zuru ezu na diski disk. Ya mere, iji mee ka nke a ghara ime, ịkwesịrị ihichapu kọmputa site na faịlụ na-adịghị mkpa na nchịkọta ndị ọzọ (1-2 ugboro kwa ọnwa). Banyere nke a na okwu.
Ihichapu kọmputa site na mkpofu - ntuziaka site nzọụkwụ site nzọụkwụ
Iji uru bara uru
Debe nkpọ diski gị na Windows 7, 8
Ngwaọrụ kachasị mma
Iji Onye Ncha Clean Clean
Ịkwesịrị ịmalite n'eziokwu ahụ bụ na na Windows, e nwere ngwá ọrụ e wuru. N'eziokwu, ọ naghị arụ ọrụ zuru oke mgbe niile, ma ọ bụrụ na ị na-eji kọmpụta ahụ anaghị emekarị (ma ọ bụ na ịnweghị ike ịwụnye ọrụ nke atọ na PC (banyere ya mgbe e mesịrị na isiokwu ahụ), i nwere ike iji ya.
Cleaner Disk dị na nsụgharị niile nke Windows: 7, 8, 8.1.
M ga-enye ụzọ zuru ụwa ọnụ otu esi agba ya na nke ọ bụla n'ime os dị n'elu.
Pịa igodo mkpọchi nke Win + R ma tinye iwu cleanmgr.exe. Ọzọ, pịa Tinye. Lee nseta ihuenyo n'okpuru.
Mgbe ahụ, Windows na-amalite usoro mmemme diski ma jụọ anyị ka anyị dee disk ka iṅomi.
Mgbe 5-10 min. oge nyocha (oge na-adabere n'otú disk gị na ego nsị na ya) a ga-enye gị akụkọ na nhọrọ nke ihichapụ. Na ụkpụrụ, kwanye ihe niile. Lee nseta ihuenyo n'okpuru.
Mgbe ịchọrọ, usoro ihe a ga-ajụ gị ma ịchọrọ ịchichapụ - dị nnọọ kwenye.
Nsonaazụ: diski diski ngwa ngwa kpochapụrụ ihe kachasị mkpa (ma ọ bụghị ihe niile) na faịlụ nwa oge. O were ihe a niile. 5-10. Ogbu mmiri, ma eleghị anya, bụ na onye na-ehichapụ ihe na-adịghị eleba usoro ahụ anya nke ọma ma na-agba ọtụtụ faịlụ. Iji wepụ ihe mkpofu nile sitere na PC - ịkwesịrị iji ọkachamara. ụlọ ọrụ, gụọ otu n'ime ha mgbe e mesịrị na isiokwu ...
Na n'ozuzu, enwere ọtụtụ ọrụ ndị yiri ya (ị nwere ike ịmatakwu ndị kachasị mma n'isiokwu m:
N'isiokwu a, ekpebiri m ịkwụsị n'otu ngwà iji mepee Windows - Clean Disk Cleaner.
Njikọ nke. weebụsaịtị :www.wisecleaner.com/wisediskcleanerfree.html
Nke a bụ isi uru (n'echiche m, n'ezie):
Enweghị ihe ọ bụla dị oke n'ime ya, naanị ihe ị chọrọ: nhichapụ ihe mkpocha ahụ;
Free + na-akwado 100% asụsụ Russian;
Oge ọsọ ọsọ dị elu karịa ọrụ ndị ọzọ niile yiri ya;
Jiri nlezianya nyochaa kọmputa ahụ, na-enye gị ohere ịhapụ ohere disk karịa ọtụtụ ndị ọzọ;
Mgbanwe usoro ntọala maka ịgụ isiokwu na ihichapu enweghị isi, ị nwere ike gbanyụọ ma gbanye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile.
Mgbe ị jisịrị ọrụ ahụ, ị ​​nwere ike ozugbo pịa bọtịnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (n'elu aka nri, lee foto dị n'okpuru ebe a). Nyochaa dị nnọọ ngwa ngwa (ngwa ngwa karịa Cleaner Windows standard).
Mgbe nyochachara, a ga-enye gị akụkọ. Site n'ụzọ, mgbe ngwá ọrụ dị na Windows 8.1 os, ihe dị ka 950 MB nke ihe mkpofu! A chọrọ ka ị dọọ igbe ahụ ịchọrọ iwepụ ma pịa bọtịnụ doro anya.
Site n'ụzọ, usoro ihe ahụ na-ehichapụ disk site na enweghị isi ngwa ngwa ka ọ na-enyocha. Na PC m, ọrụ a na-arụ ọrụ ugboro atọ karịa ngwa ngwa ngwa Windows
Na mpaghara nkebi nke isiokwu ahụ, ịkwesịrị ime obere akwụkwọ ka ọ bụrụ ihe doro anya na ihe dị na ya ...
Edere faịlụ niile ị dee na diski ike na ya na obere iberibe (ndị ọkachamara nwere ahụmahụ na-akpọ ụyọkọ "mkpụrụ" ndị a). Ka oge na-aga, mgbasa na diski nke mkpụrụ ego ndị a amalite ịmalite ngwa ngwa, kọmputa ga-etinyekwu oge iji gụọ nke a ma ọ bụ faịlụ ahụ. Oge a na-akpọ fragmentation.
Ya mere, ihe niile ahụ dị n'otu ebe ahụ, ha na-anọchi anya ma gụọ ya ngwa ngwa - ịkwesịrị ịmegharị ọrụ - nhichapụ (maka ozi ndị ọzọ gbasara ịgbada diski ike). Banyere ya na a ga-atụle n'ihu ...
Site n'ụzọ, ịnwekwara ike ịgbakwunye eziokwu ahụ na usoro NTFS bụ ihe na-adịchaghị mfe na mkpirisi karịa FAT na FAT32, n'ihi ya, a pụrụ imebi mmechi obere oge.
Pịa nchikota nchịkọta WIN + R, wee tinye iwu dfrgui (lee nseta ihuenyo n'okpuru ebe a) wee pịa Tinye.
Ọzọ, Windows ga-ebido ọrụ ahụ. A ga-enye gị ihe niile siri ike nke Windows hụrụ. Na kọlụm "ọnọdụ ugbu a" ị ga-ahụ ọnụ ọgụgụ pasent disk. N'ozuzu, nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ ụgbọala wee pịa bọtịnụ kachasị mma.
N'ozuzu, ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ma ọ bụghị yana ọrụ pụrụ iche, dịka ọmụmaatụ, Ọkachamara Clean Clean.
Gbanyụọ ọrụ ahụ, họrọ ọrụ arụ ọrụ, kọwaa diski wee pịa bọtịnụ "defrag" na-acha akwụkwọ ndụ.
N'ụzọ dị ịtụnanya, na mmegiderịta, ọrụ a na-ekpuchi onye nlekota disk diski na Windows 1.5-2 ugboro!
Na-eduzi kọmputa mgbe niile site na mkpofu, ọ bụghị nanị ịhapụ ohere diski, kamakwa ị meziwanye ọrụ gị na PC.
Nke ahụ bụ maka taa, ọdịmma niile!